Ifilimu yokuncamathela yeH & H hotmelt: Guqula indlela yentlanganiso yakusasa
Inkampani yeH & H hotmelt yokuncamathela ekugqibeleni igqibe kwelokuba itshintshe indlela yentlanganiso yakusasa ngengxoxo, kuba indlela ebiyiyo ngaphambili ukuze kukhuthazwe umdla womntu wonke ukuba athathe inxaxheba ekubeni owokugqibela ongena kwigumbi lokuhlangana kufuneka abe ngumamkeli kwaye unemida kwimixholo kunye nokuchasana. ...
"Ukuziqeqesha kundinika inkululeko" Indebe yokuqala ye-Hehe 6KM Healthy Run!
Ngentsasa yokuqala ka-Epreli 15, abagqatswa base-Hehe bahlanganisana kumzi-mveliso waseQidong. Ngesiqubulo esithi "Ukuziqeqesha kundinika inkululeko", iNdebe yokuqala ye-Hehe 6KM Healthy Run yaqala ngokusemthethweni. Ukubaleka okusempilweni kwe-6KM, umzila obonisiweyo uboniswa kulo mzobo: Hehe New Mater ...
Izabelo zikahehe ziyakumema ukuba uthathe inxaxheba kwimiboniso yezihlangu zaseJinjiang!
iprofayile yenkampani Jiangsu Hehe New Material Co., Ltd., eyavela ngo-2004, i ishishini ezintsha elizinikeleyo kuphando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kweefilimu ezincamathelayo ezishushu zokusingqongileyo kunye neshishini lobuchwephesha kwiPhondo laseJiangsu. 1. Ulawulo lomgangatho we-ISO9001 ...
Ifilimu yokuncamathela yeH & H Hotmelt: Siza kufumana i-22th China (Jinjiang) yeHlabathi yezihlangu kwiShishini kunye neFifth International Sports Industry Expo
Siza kungena kwi-22th China (Jinjiang) yeHlabathi yezihlangu kwiShishini kunye neFifth International Sports Industry Expo eJinjiang City, kwiPhondo laseFujian ukusukela nge-19.04.2021-22.04.2021. Ngelo xesha, siya kubonisa ukuba sinyibilikise imveliso yokuncamathela eshushu esetyenziswa kwicandelo lezinto zezihlangu, kwaye sikubonise ...
I-H & H eshushu inyibilika kwifilimu yokuncamathela: ukuba noqeqesho kwindlela yokucinga
Kwiveki ephelileyo, abasebenzi bethu bathathe inxaxheba kuqeqesho lweentsuku ezintathu ngeendlela zokucinga kunye neendlela zokusebenza. Kulo msebenzi, wonke umntu ufumana amava kunye nolwazi ngokusebenzisana nomnye, ukoyisa ubunzima kunye nokugqiba imisebenzi edibeneyo. Umhlohli uza kwabelana ngenyaniso ethile kunye ne-carefull ...
I-H & H ishushu inyibilika ifilimu yokuncamathela: Zonke izinto ezenziwayo zemichiza zigcina ukunyuka kwamaxabiso
Bathengi abathandekayo Ukusukela kwisizathu esingaqikelelwayo, amaxabiso ezinto ezisetyenzisiweyo ekhemikhali ayenyuka ngoku kutsha nje. Sinyanzelekile ukuba sitshintshe amaxabiso ethu ngeli xesha lesaqhwithi samaxabiso. Zonke i-EVA zethu, i-TPU, i-PES, i-PA, iimveliso ze-PO zitshintshiwe kuluhlu lwamaxabiso. Apha sicacisa ireferensi yakho, ndiyathemba ukuba uyaqonda ...
Ifilimu yokuncamathela yeH & H hotmelt: Intlanganiso yokwabelana ngeemvakalelo malunga nomsitho ngeCawe ephelileyo
Ifilimu yokuncamathela yeH & H: Intlanganiso yokwabelana ngeemvakalelo malunga nomsitho ngeCawe ephelileyo Ngale ntsasa, indawo yokuthengisa yeH & H iququzelele intlanganiso yokwabelana ngeemvakalelo kunye neengcinga malunga nomsitho ngeCawe ephelileyo. Ngexesha lentlanganiso, wonke umntu wabelane ngezinto ezininzi zokwenene kunye neemvakalelo okoko ...
Ifilimu yokuncamathela eshushu yeH & H: Ukuphucula umgangatho wentlanganiso yesebe
Sifikelele kwisigqibo sokuba intlanganiso yesebe kufuneka ibanjwe ngendlela efanelekileyo. Umbuki zindwendwe uphakamise isihloko malunga noku kwaye wavumela abaphathi abaninzi kunye nabasebenzi ukuba bavakalise izimvo zabo neengcebiso. Ngokwezimvo ezivela kumphathi weHR, kunyanzelekile ukuba ulawule ixesha ...
H & H hotmelt iglu enamathelayo: omnye wabathengi bethu weza kuhlola imveliso
Izolo omnye wabaxhasi bethu ovela eMelika uze kuhlola imveliso. La manenekazi mabini achubekile kwaye anobubele. Kuthathe malunga neeyure eziyi-2.5 ukuqhuba ukusuka eHongqiao Airport ukuya kumzi-mveliso wethu. Xa sifikile kumzi-mveliso eQidong, eNantong, sayigqiba isidlo sasemini ngokungxama kwaye sigxile kuhlolo ...
Iimpawu zeefes ezishushu zokunyibilika kwifilimu
Hot-unyibilike ifilimu yokuncamathela luhlobo lwezinto ezinokuthi zishushu-zinyibilike ziboshwe ukwenza ifilimu ngobukhulu obuthile, kunye nokushushu okunyibilikisayo okusetyenzisiweyo kwenziwa phakathi kwezinto. Ifilimu yokuncamathela eshushu ayisiyonto inamathelayo, kodwa luhlobo lweglu. Njenge-PE, i-EVA, i-PA, i-PU, i-PES, i-polye eguqulweyo ...
Ukusetyenziswa kwe-hehe eshushu yokunyibilika kokuncamathela kugubungela udonga olungenamthungo
Ngokukhula okuqhubekayo komzi mveliso wokugubungela udonga, njengenye yezinto ezibalulekileyo ekuhombiseni kwasekhaya, ukogquma udonga akufuneki kuphela ukuba kwenziwe mhle, kodwa kukwafuneka kube nobungqongileyo kwindalo. Iglu yemveli okanye iglu enerayin edyinki incamathela eludongeni, e ...
Isinyibilikisi esincamathelayo somatshini wokuncamathela
Izixhobo ezincibilikayo zokuncamathela kwifilimu ikakhulu zahlulwe zaziindidi ezimbini ngokweendlela zokusebenza, uhlobo lokucinezela kunye nohlobo oludityanisiweyo. 1. Ukucofa izixhobo Ububanzi besicelo, obulungele kuphela izinto zeshiti, hayi ukuqengqeleka kuluhlu, ezinje ngeempawu zempahla, izixhobo zezihlangu, njl njl.